Home News Imaaraat-ka oo Hakiyay Visaha Dal Ku Galka Iyo Midka Diblomaasiyadeed Ee...
Imaaraat-ka oo Hakiyay Visaha Dal Ku Galka Iyo Midka Diblomaasiyadeed Ee Soomaaliya Kala dhexeeyay!!
Waxa sii xumaanaya Xiisada Diblumaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Imaaradka Carabta ka dib markii Saraakiil ka tirsan Ciidanka tababarayaasha ah ee Imaraadka lagu qabtay Garoonka Aden Cadde ee Muqdisho, iyago Sida lacag 9.6 Milyan oo Dolarka Mareykanka ah
Dowlada Imaaradka Carabta aya gabi ahanba joojisay ama hakisay Visaha Dal ku galka iyo kan Diblumasiyadeed ee Soomaaliya.
Arintan soo cusboonaatay aya dhibaato ku ah Ganacsatada iyo dadka ku sugan Imaraadka ee Deeganka ku ah,sido kale waxa la joojiyay Visaha ay Diblumasiyinta,Madaxda,iyo Siyaasiyiinta ay dalkaasi ku gali lahayenn.
Dalka Imaaradka Carabta oo Xiriir ganacsi oo qoto dheer la laha Soomaaliya aya arintaan cusub waxa ay saameyn ku yeelan doontaa Ganacsatada Xiriirka ganacsi la leh Imaaradka iyado Ganacsiga ugu balaaran ee dibada kaga Yimaada Soomaaliya uu Imaaradka kaga yimaado.
Ganacsata iyo Soomaalida Deeganka iyo Ganacsiga ku laha Imaaradka aya hada ku qasbanaan doono in ay Dalka dib ugu so laabtaan,maadama Xiriirki Diblumasiyadeed Iyo Viaha Dal ku galka ee labada Dal la Hakiyay.
Goor sii horeysay Wasiir ka tirsan Dowlada Imaaradka aya shegaya in Soomaaliya ay Aqoonsan yihiin,jiritaankedana aysan fara galin,balse waxa uu shegay in Soomaaliya ay xalka ku raadiyan si daahsoon taana aysan habooneen oo arinkaasi iyado lo mari karo qaab shaacsan.